Global Voices teny Malagasy » Netizen Report: Manao ahoana ny fiantraikan’ny fihetsiketsehana ao Libanona amin’ny zo nomerika? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Novambra 2019 5:06 GMT 1	 · Mpanoratra Ellery Roberts Biddle, Netizen Report Team Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Libanona, Hafanam-po, Mediam-bahoaka, Solovava, Zon'olombelona, Tatitry ny Mpiserasera
Mpanao fihetsiketsehana ao Beirota. Sary nozarain'i @michatobia tao amin'ny Twitter.
Ny Advox Netizen Report dia manolotra topi-maso iraisam-pirenena momba ireo fanamby, fandresena ary vaovao malaza momba ny teknolojia sy zon'olombelona manerana an'izao tontolo izao. Ity tatitra ity dia mandrakotra ny vaovao sy ny hetsika nanomboka tamin'ny 13 – 25 Oktobra 2019.
Nanjaka tao Beirota, Tripoli sy ireo tanàna lehibe Libaney nanomboka ny 18 Oktobra ny fihetsiketseham-bahoaka faobe, taorian'ny nidinan'ireo olona teny an-dalambe mba hanohitra ny kolikolim-panjakana, ny tsy fahombiazan'ny tolotra ho an'ny vahoaka sy ny fidangan'ny hetra. Iray amin'ireo antony nahatonga ny hetsi-panoherana ny hetra isan'andro amin'ny fampiasana ny teknolojia antso am-peo amin'ny aterineto atolotry ny sehatra tahaka ny WhatsApp sy Facetime.
Nesorina  ny hetra tamin'ny WhatsApp, saingy nitombo hery sy tanjaka isan'andro ny fihetsiketsehana. Feno sary sy horonan-tsary misy ireo olona an'arivony maro avy amin'ny sarangam-piainana samihafa ny tambanjotra sosialy ary tsy mitaky fanavaozana politika ihany izy ireo fa mitaky fifidianana mialoha ny fotoana izay hitondra governemanta vaovao.
Raha hanaraka ny fihetsiketsehana any Libanona, ireto no harahinay:
Aya Majzoub  sy Abir Ghattas  ao amin'ny Human Rights Watch
Mohamad Najem  ao amin'ny SMEX
Timour Azhari  sy Benjamin Redd  ao amin'ny The Daily Star Lebanon
Joey Ayoub , tonian-dahatsoratry ny Global Voices MENA teo aloha
Nisy ihany koa ny fifandonana mahery vaika , naterak'ireo tafika miaramila sy ny polisy mikasa hanakana ny mpanao fihetsiketsehana. Raha ny voalazan'ireo mpikatroka eo an-toerana,  dia nitarika fisamborana marobe hatramin'ny 300 izany. Nampiseho ny sary ahitana ny fisamborana  izay nozaraina tao amin'ny Twitter fa nalaina tany amin'ireo mpanao fihetsiketsehana nilahatra teny an-dalana ny findain'izy ireo.
Nifanindran-dalana tamin'ny fanentanana nomerika  manakivy ny olona tsy hanao fihetsiketsehana, nozaraina tamin'ny alàlan'ny WhatsApp sy ny tolotra media sosialy hafa ireo ezaka ireo.
Nitantara tamim-pahavitrihana momba ny fihetsiketsehana ireo mpanao gazety sy ireo trano media tsy miankina eo an-toerana, nangina tanteraka kosa  ny haino aman-jery tohanan'ny fanjakana. Ny 22 Oktobra, voaroaka zara raha misy fanazavana ny filohan'ny National News Agency. Nanontany tao amin'ny Twitter  ny mpitati-baovaon'ny Lebanon Daily Star, Benjamin Redd hoe: “Voaraoka noho ny fanaovana ny asany ve ny lehiben'ny NNA, Laure Sleiman?”
Nanao kabary tamin'ny 21 Oktobra ireo mpitarika ambony, niaiky fa misy ny alahelon'ireo mpanao fihetsiketsehana ary nanome toky ny hanatsara ny tolotra ho an'ny vahoaka sy ny politikam-panjakana, saingy milaza ny valinteny lehibe manjaka avy amin'ny fihetsiketsehana fa tsy ampy izany. Araka ny nametrahan'ny tale mpanatanteraka ao amin'ny SMEX sady mpanoratra ato amin'ny Global Voices, Mohamad Najem hoe:
Mpanao fihetsiketsehana androany:
+ Tsy miraharaha izay tolo-kevitra fanavaozana vaovao avy amin'i Harriri izahay, na dia alohan'ny daty farany aza.
+ Miala ny ao anaty rafitra politika rehetra. Mila governemanta vonjimaika izay mitarika fifidianana vaovao amin'ny taona ho avy izahay.
Ireo dia fitakianay ara-politika
Miverina ny finday, saingy mbola tapaka ny aterineto ao Kashmir
Tamin'ny 14 Oktobra, taorian'ny fahatapahana naharitra 72 andro , namerina ny tolotra SMS sy antso  ho an'ny famandrihana finday aloa vola aoriana ny manampahefana Indiana ao Kashmir. Saingy mbola miato ny tolotra aterineto sy ny fifandraisana finday aloa vola mialoha.
Nihidy tanteraka i Srinagar, tanàn-dehibe ao Jammu sy Kashmir tamin'ny 5 aogositra 2019 raha nanafoana ny andininy faha-370  amin'ny lalàm-panorenana Indiana ny governemanta India, lalàna izay nanome sata manokana fizakantena ho an'ny fanjakan'i Jammu sy Kashmir ifandirana. Naato  ny fidirana amin'ny tambajotra finday, an-tanety sy ny aterineto, raha napetraka teny an-dalana kosa ny sakan-dalana ary nohamafisina ny famerana saika ireo hetsika rehetra. Na dia efa nesorina aza ny sasany tamin'ireo fepetra ireo, mbola fehezin'ny manampahefana Indiana tanteraka ny faritra.
Maninona ireo mpikatroka miteny Arabo (sy ireo mpiserasera tsy tapaka) no voasivana ao amin'ny Twitter?
Mpisera Twitter an-jatony – manoratra amin'ny teny Arabo, ary mipetraka any Ejipta no ankamaroany- no na voasivana ny siokan'izy ireo  na naato ny kaontin'izy ireo Twitter tato anatin'ny herinandro vitsivitsy izay. Niala tsiny  ny Twitter noho ny fampiatoana nisy fahadisoana, saingy tsy nanazava izay nahatonga izany. Nahita ireo manam-pahaizana taorian'ny fanapahana  fa maro no toa nateraky ny teny fianianana (ompa madinidinika?), izay tsy voaràra ao amin'ny Twitter.
Ny hita tamin'ny voalohany ho toa andiana fahadisoana dia toa toy ny zavatra lehibe kokoa , ary manamarika izany ireo mpikatroka antserasera, manasongadina ny fampiatoana ny kaonty amin'ny tenirohy #WeWillSpeak  sy #هنتكلم .
Nanaisotra ny fandraràna ny magazain-dalao Google ny manampahefana Iraniana
Tamin'ny 9 Oktobra, nomena baiko ny tolotra fifandraisan-davitra Iraniana mba hanakana ny Google Play, fivarotana fampiharana ofisialin'ny Google, “haingana araka izay azo atao”. Voalaza fa navoakan'ny mpampanoa lalàna lefitra misahana ny sehatra antserasera, Javad Javidnia  ny baiko.
Raha tanterahana soa aman-tsara, dia hanosika ny Iraniana hampiasa ny tolotra eo an-toerana izany izay ho mora ho an'ny fanjakana ny hanaramaso, hanivana ary hanodikodina tahiry manokana tsy tahaka ireo tolotra antserasera manerantany marobe. Na i Amin Amirsharifi, Filoha Tale Jeneralin'ny Cafe Bazaar , magazay fampiharana lehibe indrindra eo an-toerana ao Iran sady mpifaninana voalohany amin'ny Google Play aza nisioka  fa tsy nanohana ny hetsika izy.
Tsy nahavitra nivarotra ny Facebook ho toy ny akanin'ny fahalalahana miteny i Zuckerberg
Tamin'ny lahateny  tamin'ny 18 Oktobra tao amin'ny Oniversite Georgetown, nidera ny fanitsiana voalohany Amerikana ny Filoha Tale Jeneralin'ny Facebook, Mark Zuckerberg ary naneho ny Facebook ho sehatra iray nanampy tamin'ny fanatsarana ny tontolon'ny aterineto manerantany tamin'ny alàlan'ny fanomezan-danja ny fahalalahana miteny manerana izao tontolo izao.
Nahatonga ny fisalasalan’ ireo manam-pahaizana manokana momba ny zon'ny sivily sy ny politikan'ny aterineto izany kabary izany. “Raha midera ny fiantraika mazava amin'ny fanapariahana fahalalana sy vaovao, dia tsy miraharaha ireo toetra manapoizina ao amin'ny orinasany izy”, hoy ny profesora iray ao amin'ny Oniversiten'i Virginia, Siva Vaidhyanathan .
Tamin'ny lahatsoratra fanehoan-kevitra tao amin'ny Washington Post , nitsikera ny filoha tale jeneralin'ny Facebook ny filohan'ny Vatsim-piarovana eny amin'ny Fitsarana an'ny NAACP, Sherrilyn Ifill tamin'ny fanononana ny anaran'ireo mpitarika zo sivily amerikanina toa an'i Martin Luther King Jr., izay noezahin'i Zuckerberg ampifandraisana amin'ny soatoavin'ny orinasa momba ny fahalalahana miteny ny zava-bitan.
Ny tsy voamarik'i Zuckerberg dia lasibatry ny fanafihana mahery setra (sy ny vono olona tamin'ny farany) izay vokatry ny karazana fanentanana vaovao diso feno fankahalana izay mameno ny aterineto ary mikendry ireo andiana mpitarika zo sivily isan-karazany ankehitriny anie i King io.
Tamin'ny 21 Oktobra, nanasonia taratasy iraisana  ny vondron'ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona 40 mahery ao Etazonia, milaza ny tsy fanajana ny zon'olombelona” ataon'ny orinasa, ary mitaky amin'ny Facebook mba hanafoana ny dokambarotra manavakavaka, ny kabarin'ireo mametraka ny fotsy ho faratampony ao amin'ny sehany.
Mpanao gazety Nizeriana mety hiatrika fiampangana noho ny fandraketana resaka ao am-ponja
Mety hiatrika fiampangana heloka bevava  atsy ho atsy ilay mpanao gazety Nizeriana ‘Fisayo Soyombo  noho ny asany miafina mamotopotra ny rafitry ny fonja any Nizeria. Tamin'ny Novambra 2018, ninia tsy nandoa vola tamin'ny fiara i Soyombo mba hosamborina sy hijery akaiky sy mivantana ny rafi-pitsaràna heloka bevava. Nandany dimy andro tany amin'ny biraon'ny polisy ity mpanao gazety efa nahazo loka ity ary nigadra enina andro tao amin'ny Fonjan'i Ikoyi, any Lagos, izay nahitany, nandraketany ary avy eo nitaterany momba ireo tranga marobe momba ny kolikoly, ny fanararaotana gadra ataon'ny mpiambina ary endrika kolikoly hafa.
“Nandeha ambanin'ny tany” i Soyombo taorian'ny nandosirany ny fonenany tamin'ny Oktobra 21. Raha hita sy voasambotra izy, dia ho voampanga araka ny Lalàna Nizeriana Fizarana faha-29 momba ny raharaha any am-ponja  [Zana-pizarana 1 (d)]  noho ny fahazoana sy fampiasana “fitaovam-pifandraisana” ao anaty. fonja mba handraketana “resaka amin'ny alalan'ny telefonina finday na fitaovana hafa” tsy nahazoana alàlana. Raha voaheloka, dia mety ho voasazy handoa onitra tsy mihoatra ny 2 tapitrisa naira [eo amin'ny 5 500 dolara], na sazy an-tranomaizina roa taona na izy roa ireo mihitsy izy.
Hiaro ny fahalalahana miteny ve ny governemanta tetezamita ao Sodàna?
Mampiseho famantarana  ny governemanta tetezamita napetraka tao Sodàna tamin'ny volana Aogositra 2019, taorian'ny fanonganana an'i Omar al-Bashir fa maniry hanatsara ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'ny firenena izy. Nandritra ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana tamin'ny faran'ny volana septambra 2019, nanao sonia ny Fampanantenana manerantany hiaro ny fahalalahan'ny media ny praiminisitra Sodaney Abdulla Hmadok ary nilaza fa “tsy hisy any Sodana vaovao intsony ny mpanao gazety voasazy na gadraina.”
Tamin'ny voalohan'io volana io, dia namoaka didy hametraka ny Fahefana momba ny Fifandraisan-davitra sy ny Paositra ho eo ambany fahefan'ny Filankevitra, sy miala amin'ny Ministeran'ny Fiarovana ny Vaomieran'ny Fiandrianan'i Sodàna,  izay natao hitarika ny tetezamita telo taona mankany amin'ny fitondrana sivily. Saingy tsy mbola niova ny fitsipika sy ny politika izay mifehy ny asan'ny mpitantana, ary nandray anjara goavana tamin'ny fanapahana sy fanatanterahana ny politikam-panjakana teo aloha momba ny sivana amin'ny rafitra fanivanana sy fanakatonana ny fahefana.
“Mametraka fameperana manjavozavo amin'ireo zo fototra ireo ny lalàna manan-kery ary mamela ny manampahefana hanakana sy hanivana votoaty tsy misy didim-pitsarana,” hoy i Mohamed Suliman  tamin'ny fanadihadiana ho an'ny Global Voices .
Ellery Roberts Biddle , Nwachukwu Egbunike , Mohamed ElGohary , Rezwan Islam , Leila Nachawati , Mohamed Suliman  sy Taisa Sganzerla  no niara-nanoratra ity tatitra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/21/144628/
 hetra isan'andro : https://www.aljazeera.com/ajimpact/lebanon-reverses-plans-tax-whatsapp-calls-191018070117655.html
 fifandonana mahery vaika: https://twitter.com/aemasri/status/1185273545909297152
 mpikatroka eo an-toerana,: https://twitter.com/monajem/status/1185441099042738176
 sary ahitana ny fisamborana: https://twitter.com/sa0un/status/1185292639765225473
 fanentanana nomerika: https://twitter.com/AbirGhattas/status/1186203846265192448
 nangina tanteraka kosa: https://twitter.com/benredd/status/1186734388815507457
 Nanontany tao amin'ny Twitter: https://twitter.com/benredd/status/1186734402635812866
 fahatapahana naharitra 72 andro: https://advox.globalvoices.org/2019/10/16/india-partially-lifts-communications-blackout-in-kashmir-internet-still-down/
 namerina ny tolotra SMS sy antso: https://scroll.in/article/940485/the-daily-fix-the-sound-of-mobile-phones-ringing-does-not-mean-the-return-of-normalcy-to-kashmir
 nanafoana ny andininy faha-370: https://www.aljazeera.com/news/2019/08/india-revokes-kashmir-special-status-latest-updates-190806134011673.html
 voasivana ny siokan'izy ireo: https://egyptianchronicles.blogspot.com/2019/10/wewillspeak-egyptian-tweeps-speak-up.html
 Niala tsiny: https://twitter.com/TwitterMENA/status/1182401453484322817
 manam-pahaizana taorian'ny fanapahana: https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/how-twitter-gagging-arabic-users-and-acting-morality-police/
 avad Javidnia: http://www.iranhumanrights.org/2019/10/iran-blocks-domestic-hosting-companies-from-servicing-banned-websites/
 Cafe Bazaar: https://cafebazaar.ir/
 lahatsoratra fanehoan-kevitra tao amin'ny Washington Post: https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/10/17/mark-zuckerberg-doesnt-know-his-civil-rights-history/
 taratasy iraisana: https://civilrights.org/resource/letter-urging-facebook-to-protect-civil-rights/
 fiampangana heloka bevava: https://advox.globalvoices.org/2019/10/23/nigerian-journalist-under-threat-of-arrest-for-expose-of-police-and-prison-corruption/
 efa nahazo loka : https://wscij.org/online-news-platforms-shine-beacon-wole-soyinka-awards/
 Lalàna Nizeriana Fizarana faha-29 momba ny raharaha any am-ponja: https://placng.org/wp/wp-content/uploads/2019/08/Nigerian-Correctional-Service-Act-2019.pdf
 Mampiseho famantarana: https://advox.globalvoices.org/2019/10/15/internet-censorship-in-sudan-rethinking-laws-and-tactics-that-served-an-authoritarian-regime/
 Fampanantenana manerantany hiaro ny fahalalahan'ny media : https://khartoumstar.com/en/2019/09/26/hamdok-signs-global-pledge-to-defend-media-freedom/
 namoaka didy : https://www.snn-news.net/?p=31956
 Vaomieran'ny Fiandrianan'i Sodàna,: https://en.wikipedia.org/wiki/Sovereignty_Council_of_Sudan